Iran: Mety Hiatrika Sazy Ho Faty i Hossein Derakhshan (“Hoder”), Bilaogera Nogadraina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2017 3:15 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Nederlands, Português, Français, Swahili, বাংলা, English
(Marihana fa efa tamin'ny volana Septambra taona 2010 no nivoaka ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
(Vaovao farany: Marihana fa tsy nosaziana ho faty i Hossein ary mbola velona amin'izao fotoana izao)
Loharanom-baovao azo antoka no nilaza tamin'ny Global Voices fa mitady hanameloka ho faty an'i Hossein Derakhshan, bilaogera Iraniana (fantatra amin'ny hoe “Hoder”) ny mpampanoa lalàna ao Tehran. Mbola tsy namoaka didim-pitsarana mikasika ny raharaha i Salavati, mpitsara mpitarika ny raharaha. Voampanga ho “miara-miasa amin'ny fahavalom-panjakana, manao fampielezan-kevitra manohitra ny fitondrana Islamika, manevateva ny fahamasinan'ny fivavahana, ary manao fampielezan-kevitra ho an'ny vondrona revolisionera” i Derakhshan. Nosamborina izy 22 volana lasa izay, ary nanomboka tamin'ny volana Jiona 2010 ny fitsarana azy.
Mbola tsy mazava ny antony nahatonga ny fisamborana voalohany an'i Hoder tamin'ny fiverenany tany Iran avy any Canada tamin'ny taona 2008, saingy maro no nanombatombana fa ny diany roa tany Israely (izay niparitaka be tamin'ny fampahalalam-baovao) no antony voalohany indrindra.
Manana pasipaoro Kanadiana i Derakhshan, saingy tsy ankasitrahana ao Iran ny fizakàna zom-pirenena roa ary ratsy ny fijerin'ny governemanta ny fitsidihana an’ i Israely.
Ny manahirana amin'ity raharaha ity, dia i Hoder nahazo laza manerantany ho bilaogera Iraniana malaza sy mpikatroky ny fahalalahana miteny (na dia izy efa nibilaogy tato amin'ny Global Voices tamin'ny taona 2004 sy 2005 koa aza). Taty aoriana, niova fijery izy ary nanoratra fanohanana ny politikan'ny Filoha Mahmoud Ahmedinajhad momba an'i Etazonia, ny fitaovam-piadiana nokleary, Isiraely, ary na dia ny tsy fandeferana ny mpanohitra avy amin'ny mpikatroka ny zon'olombelona aza.
Tamin'ny volana Aprily 2009, namoaka taratasy ny filoha Iraniana, Filoha Ahmadinejad, mitaky ny raharahan'i Hossein Derakhshan mba hotontosaina ara-potoana sy ara-dalàna. Tsy naneho hevitra ampahibemaso mikasika ny raharahan'i Derakhshan ny governemanta Kanadianina. Nantsangan'ireo mpikatroky ny fahalalaham-pitenenana antserasera ny bilaogy Free Hoder fotoana fohy taorian'ny fisamborana azy tamin'ny taona 2008.
Tao amin'ny Twitter, nisioka ny vaovao momba ny mety ho fanamelohana ho faty azy i Sanam Dolatshahi, ary nilaza izany koa ny tranonkala iray amin'ny teny Persiana antsoina hoe Kamtarin, nanamarika fa na dia teo aza ny tsaho fa nogadraina i Derakhshan noho ny “fitsikilovana” tany Israely, dia toa tsy izany no iray amin'ireo fiampangana azy izay tadiavin'ny mpampanoa lalàna hanasaziana azy ho faty.
Mbola tsy misy tatitra na fanavaozam-baovao momba ity raharaha ity tao amin'ny bilaogy natsangan'ny fianakavian'i Derakhshan, Edalat Baraye Hossein Derakhshan (midika hoe ny rariny ho an'i Hossein Derakhshan). Ny lahatsoratra farany tao amin'ny bilaogin'ny fianakaviana dia natao tamin'ny 15 Aogositra, ary nilaza fa efa nifarana herinandro maro lasa ny fitsarana an'i Hossein:
Miandry ny didim-pitsarana isika. Tsy nahazo izy na dia fialan-tsasatra herinandro miala ny fonja mba hody any an-trano … Ramadany faharoa izy izao no tsy tany an-trano … Nilaza taminay izy fa lasa tsara kokoa ny kalitaon'ny sakafo nanomboka tamin'ny Ramadany farany. Tena manahy mafy ny reniny … Voalaza tamin'ity volana ity fa mamaly vavaka mora foana Andriamanitra… Miangavy, aza hadinoina i Hosein-anay.
Bilaogera Iraniana Z8tun namintina ny toe-draharaha efa ho roa taona lasa izay:
“Iraniana hafa no tratra nitsidika an'i Israely, saingy navotsotra afaka ora vitsy taorian'ny famotorana. Mihevitra ny sasany fa nosamborina noho ny fanevatevana ireo mpitondra fivavahana sasany tao amin'ny firenena i Derakhshan, izay lasa mpanohana ny governemantan'ny filoha Ahmadinejad tato anatin'ny taona vitsivitsy. Nilaza tamin'ny fampahalalam-baovao tandrefana mihitsy aza izy, na dia teo aza ny fijoroana vavolombelona maro momba ireo bilaogera nogadraina, fa tsy misy olona mankany am-ponja (migadra) noho ny votoatin'ny blaogin'izy ireo. “
Nanao famoretana tamin'ny tontolon'ny bilaogy ny Repoblika Islamika tato anatin'ny taona vitsy, ary misy ireo bilaogera sasany voasazy higadra tao Iran, anisan'izany ilay mpikatroka zon'olombelona, Shiva Nazar Ahari. Ny 18 Martsa 2009, Omid Reza Mir Sayafi no bilaogera voalohany maty noho ny toe-javatra mampiahiahy tao amin'ny fonja Iraniana.